'भ्यालेन्टाइन डे' मा प्रेम नगर्ने र दाइजो माग्नेसँग विवाह नगर्ने भनेर शपथ खाएपछि...
एजेन्सी, २ फाल्गुन । भारतको महाराष्ट्रको अमरावतीस्थित एक विद्यालयका छात्राहरूले प्रेम र प्रेम विवाह नगर्ने भन्दै शपथ खाएका छन् ।
पछिल्लो समय केटा-केटीबीच प्रेम बढिरहेको र दाइजोको प्रथा पनि बढिरहेको भन्दै छात्राहरूलाई प्रेम नगर्ने र प्रेम विवाह नगर्ने शपथ खुवाइएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
अमरावतीको महिला तथा कला महाविद्यालयका छात्राहरूले शपथ लिँदै भनेका थिए- ‘म कसम खान्छु कि आफ्ना आमाबाबुप्रति मेरो पूर्ण विश्वास छ । मेरोसामु घटिरहेका घटनालाई मध्यनजर गर्दै मैले प्रेम र प्रेम विवाह गर्नेछैन । त्यस्तै दाइजो माग्नेसँग पनि विवाह गर्नेछैन । भविष्यकी एक आमाको रुपमा आफ्नी भावी बुहारीसँग पनि दाइजो लिनेछैन । र छोरीलाई पनि दाइजो दिनेछैन ।’
महिलाविरुद्ध भइरहेको हिंसामाथि अंकुश लगाउन भन्दै आफूहरूले यस्तो कसम खाएको पनि विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । छात्राहरूले सो अवसरमा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएकी २५ वर्षीय अंकिताप्रति श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गरेका थिए ।
तर विद्यार्थीले प्रेम र प्रेम विवाह नगर्ने भनेर शपथ खाएपछि बिजेपीका एक नेताले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
भाजपा नेता पंकज मुण्डेले प्रश्न गर्दै ट्विटरमा लेखेका छन् – ‘हास्यास्पद !! अनौठो !! अमरावतीको एक विद्यालयका छात्राहरूले प्रेममा नपर्ने र प्रेम विवाह नगर्ने संकल्प गरेछन् । केटीहरूले मात्रै किन शपथ लिन्छन् ?’
‘छात्राको सट्टा छात्र (केटा) हरूलाई एकतर्फी प्रेममा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्दैनौं र कुनै पनि युवतीको ज्यान लिदैनौं भनेर शपथ खुवाउनु पर्‍यो । कुनै पनि युवतीलाई खराब नजरले हेर्दिनँ भनेर शथप खुवाउनु पर्‍यो । कसैमाथि यस्तो कुरा हुन दिन्नौं भन्दै शपथ खुवाउनु पर्‍यो’, मुण्डेले ट्विटरमा लेखेका छन् ।